恥 - Wikipedia
fanoratana ny sinograma 恥
恥 dia kanji ampiasain'ny fiteny japoney, ny fiteny koreanina ary ny fiteny sinoa. Voasokajy ao amin'ny tōyō kanji 当用漢字 tōyō kanji, kanji fampiasa) ity kanji ity.
Dae Jaweon :
Ny rômanizasiona Yale indray dia ny sistema efatra noforonina nandritry ny Ady lehibe faharoa ho an'ny olona militera amerikana. Norômanizeny ny fiteny efatra tenenina ao Azia Atsinanana : ny fiteny mandarina, ny kantoney ary ny fiteny koreana sy ny fiteny jeponey. Na dia izany, ny romanizasiona efatra dia tsy misy fifandraisana ary ny litera any anatin'ny romanizasiona teny iray dia mety tsy mitovy fanononana amin'ny romanizasiona ny teny hafa.
Ny fanononana Yale ho an'ity sinôgrama ity dia chi2
Hangul : 치
Eumhun : 부끄럼 치, 욕될 치
Mba hanampy amin'ny fanononana sy ny fahazoana sary an-tsaina ilay sinôgrama, na mb ahanoritra tsara ilay sinôgrama mba hanasamihafa azy amin'ny hafa mitovy fanononnaa, ny rakibolana momban'ny sinôgrama na ny boky fianarana dia mampifanarana feo sy teny manono ny fikany. Io fomba famakiana ny sinôgrama amin'ny alàlan'ny dikany sy ny fanononany dia tenenina hoe eumhun (음훈; 音訓; avy amin'ny 音 « feo » + 訓 « dika », « fampianarana »).
kun’yomi : はじる (hajiru), はじ (haji), はずかしい (hazukashii)
Ny famakiana nanori dia famakiana kun'yomi ampiasaina amin'ny anaran-toerana, anaran-olona sns.
Hita tao amin'ny "http://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=恥&oldid=155871"	Sokajy : Pejy misy rohin-drakitra tapakaKanji	Menu de navigation
Voaova farany tamin'ny 9 Jiona 2011 amin'ny 20:59 ity pejy ity